Chelsea oo la timid qorsho cusub ay ku dooneyso inay kaga ilaashato Hazard kooxda Real Madrid – Gool FM
Chelsea oo la timid qorsho cusub ay ku dooneyso inay kaga ilaashato Hazard kooxda Real Madrid
(Chelsea) 05 Agoosto 2018. Warbaahinta Ingariiska ayaa xaqiijisay maanta oo Axada in Chelsea ay dalab u dirtay xidigeeda reer Belgiam Eden Hazard si uu heshiis cusub ugu saxiixo kooxda, islamarkaana uusan ugu dhaqaaqin kooxda Real Madrid.
Wargeyska Ingariiska kasoo baxa ee “The Times” ayaa wuxuu daaha ka qaaday in Chelsea ay mushahar ahaan u siin doonto isbuucii Hazard aduun dhan 300 kun ginni, hadii uu saxiixo heshiiska cusub.
Kooxda reer London ee Blues ayaa diidan inay iska fasaxdo xidigeeda reer Belgiam Eden Hazard, maadaama ay u aragto kan koowaad ee garoonka Stamford Bridge.
Sida laga soo xigtay wargeyskan, gaabiska ku yimid raacdada ay Real Madrid ugu jirtay saxiixa Hazard ayaa wuxuu imaanayaa kadib markii ay kooxda Chelsea sheegtay in laacibkan ay ku fasaxi doonto aduun dhan 200 milyan oo euros.
RASMI: Toni Kroos oo ku guuleestay abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka ee dalka Jarmalka